Imvelo yoshukela wegazi emadodeni kanye nezimbangela zokuphambuka > Okunye
Imvelo yoshukela wegazi emadodeni kanye nezimbangela zokuphambuka
Amazinga kashukela egazini aguqulwa ngaphansi kwethonya lezinto eziphathelene nokuphila kanye ne-pathological. Lokhu kufaka phakathi iminyaka yobudala, indlela yokuphila, ifa eliyindlalifa, izifo ezingamahlalakhona. Ngabe yini inqubo yeglucose emadodeni ngeminyaka ehlukene? Asilungise.
Kumadoda, ushukela wegazi ojwayelekile ngu-3.3-5.5 mmol / L. Lesi sibalo siyahlukahluka ngokuya ngesimo sempilo, kepha izici ezihlobene nobudala nazo ziyasithinta.
Imvelo yoshukela wegazi emadodeni, kuya ngeminyaka
Imvelo, mmol / l
Uma ikhula indoda, iyanda inkambiso. Futhi lokhu akubangelwa kuphela kuma-pathologies ahlangane nawo ekugugeni, kepha futhi nasekucacisweni komsoco, izinga lomsebenzi womzimba, kanye nokushintshashintsha kwe-testosterone. Izinga le-glucose lithonywa yimikhuba emibi, izingcindezi ezidlulisiwe. Ngakho-ke, eduze nobudala, le nkomba kufanele iqashelwe futhi, nganoma yikuphi ukuguquguquka, sizinza isimo ngokushesha okukhulu. Ngemuva kweminyaka engama-40, ingozi yokwanda kwesifo sikashukela sohlobo lwe-2 yanda. Lokhu kungenxa yezinguquko ezihlobene nobudala nefa. Ngemuva kweminyaka engama-50, wonke amadoda, kubandakanya nabesilisa abanempilo, kufanele abe nokulawulwa kashukela njalo ezinyangeni eziyisithupha.
Isimo esiphezulu seshukela silawulwa yi-hormone insulin. Isimo esiphansi i-glucagon (ekhiqizwa kuma-pancreas), ama-adrenaline, ama-norepinephrine nama-glucocorticoid mahormone (atholakala emithanjeni ye-adrenal). Futhi, ukulawulwa kwe-glucose kwenzeka ngokubamba iqhaza kwamaseli e-secretolytic e-gland yegland kanye namaqembu aqhamuka ku-hypothalamus kanye ne-pituitary gland. Ukwehluleka kunoma yiliphi izinga lalesi simiso kuholela ekushintshashintsheni kwamazinga kashukela.
Ukulawula amazinga abo kashukela, amadoda kudingeka ahlolwe njalo ushukela wegazi. Ucwaningo lunqunywe esiswini esingenalutho, mhlawumbe ekuseni, ngoba ukudla akunakuthathwa amahora angama-8 ngaphambi kwawo. Ngobusuku, kubalulekile ukugwema ukucindezela ngokomzimba nangokomzwelo, uma kungenzeka, ukungadli ngokweqile, ukungaphuzi utshwala, ukulala.
Imvamisa, igazi lithathwa emunweni, endaweni yesibhedlela, isampula lingathathwa emthanjeni. Uma ushukela wegazi osheshayo efinyelela ku-5.6-6.6 mmol / L, lokhu kubizwa ngokuthi yi-glucose susceptibility disorder, noma ukubekezelelana. Lesi simo sithathwa njengokuphambuka kokujwayelekile futhi siyisimo sangaphambi kwesifo sikashukela. Ukuqinisekisa ukutholwa, kutholwa ukuhlolwa kwamaphilisi kashukela.
Lapho ushukela wokuzila usuka ku-6.7 mmol nangaphezulu, lokhu kubonisa isifo sikashukela. Ukuqinisekisa ukutholwa, kuthathwa ukuhlolwa kwegazi okusheshayo, ukuhlolwa kwe-glucose nokubekezela kanye namazinga e-hemoglobin e-glycated.
Isimo lapho ushukela wegazi wedlula okwejwayelekile ubizwa nge-hyperglycemia.
Phakathi kwezimbangela zesehlakalo:
ukusetshenziswa kabi kotshwala nogwayi
ukwelashwa okuhlala isikhathi eside ngezidakamizwa ze-hormonal,
izifo ezithile ezingamahlalakhona
kanye nokulimala kanye nomonakalo wezitho zangaphakathi.
Kwabesilisa, ukwanda koshukela wegazi kuvame ukwenzeka ngokumelene nesizinda sokuxineka, ukungondleki, ukukhulupha ngokweqile, kepha ngemuva kokuqeda isisusa esidabukisayo, i-glucose ibuyela kokujwayelekile. Futhi, lesi simo singaphawulwa ngenxa yokuhlaselwa yisifo senhliziyo, isifo sohlangothi, i-acomegaly. I-hyperglycemia yesikhathi eside kwesinye isikhathi ikhombisa ukuphazamiseka okukhulu kwezitho nezinhlelo ezahlukahlukene, kufaka nohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela.
Izimpawu ze-hyperglycemia zifaka:
isikhumba esomile nolwelwesi lomlomo,
Kwesinye isikhathi ukwephulwa kuhambisana nokuncipha kwesisindo, ikhanda kanye nesiyezi. Indoda ingazizwa ikhathala ngokwengeziwe, ukujuluka, ukuncipha kombono. Nge-hyperglycemia, ukuqubuka kwegazi okungekuhle, ukukhiqizwa kabusha kwesikhumba okungekuhle nokungatheleleki komzimba okuphansi kuyabonakala.
Ukulungisa ushukela wegazi ngokwejwayelekile uma kwenzeka kuyi-hyperglycemia, kungcono ukugcina ukudla okune-carb ephansi. Kuzosiza ukwehlisa ushukela, cholesterol nomfutho wegazi. Kuyasiza futhi ukuthatha ujusi we-beetroot, itiye le-blueberry, izilinganiso zentambo kanye nomhlonyane: zivimbela ukukhula kwe-prediabetes. Njengoba kunoshukela kwabesilisa, lokhu kudla kufakwa ngemishanguzo yokwehlisa ushukela kanye nemijovo ye-insulin.
Isimo lapho ushukela wehla khona ngokujwayelekile kubizwa ngokuthi yi-hypoglycemia. Kulesi simo, kunendlala yamandla eyaziwayo yawo wonke amasistimu womzimba.
I-hypoglycemia emnene ihambisana:
Ukwehla kwezinga likashukela wegazi endodeni, kulapho kuthiwe lezimpawu ziba khona. Lapho inkomba yehlela ngaphansi kuka-2.8 mmol / L, ukuxhumanisa, isiyezi, ubuthakathaka obukhulu, kanye nombono ophansi kungenzeka.
Uma isiguli singasizwa, kuba nesigaba esinzima. Izimpawu zalo ukuwohloka ngokweqile, ukujuluka, ukugoba, ukulahlekelwa ukwazi. Kube sekwenzeka ukhehla we-hypoglycemic, lapho ithoni yemisipha, izinga lokushaya kwenhliziyo kanye nengcindezi yehla, ikhanya inyamalale nokujuluka. Ngaphandle kokunakekelwa ngudokotela, i-hypoglycemic coma ingabulala.
ukudla okune-carb ephansi noma ukuzila ukudla okungamahora ayisithupha,
Lapho kudliwa inani elikhulu lokudla okumnandi, imbangela yalesi simo iba secastion eyengeziwe we-insulin emzimbeni. Esikhathini sikashukela, ukubalwa okungalungile komthamo we-insulin kungaholela kulokhu.